Ungayithola kanjani kabusha iphasiwedi ye-Gmail | Amagajethi Ezindaba
Isithombe sendawo yokubeka uLaura Torres | 07/06/2022 17:49 | Aplicaciones
-Google inikeza izinsiza ezihlukahlukene ongakwazi ukuzifinyelela, ngesinyathelo esilula njengokwenza i-akhawunti. Kuyi-a insiza yamahhala, futhi ngayo singasebenzisa izinhlelo zokusebenza ezahlukene ezinikezayo i-imeyili, i-office automation, isitoreji samafu, i-YouTube, phakathi kokunye. Futhi, nge-akhawunti ye-Gmail, ungakwazi ukufinyelela amanye amawebhusayithi ngokuqinisekisa nje ngegama lomsebenzisi nephasiwedi.
Kodwa, Kuthiwani uma silahlekelwa iphasiwedi ye-akhawunti yethu ye-Gmail? Lapha sizokufundisa ukuthi ungayibuyisela kanjani.
1 Ungalithola kanjani kabusha iphasiwedi ye-Gmail
1.1 Ukhohliwe iphasiwedi yakho
1.2 Ungayakha kanjani iphasiwedi eqinile ye-Gmail?
2 Ukhohlwe ikheli lakho le-imeyili
3 Othile usebenzisa i-akhawunti yakho
4 Awukwazi ukungena ngemvume ngesinye isizathu
5 Buyisa i-akhawunti ye-Google esusiwe
6 Angikwazi ukubuyisela iphasiwedi yami ye-Gmail
Ngokuvamile, zonke izinsizakalo ezidinga ukubhaliswa Banesistimu esivumela ukuthi sibuyisele amaphasiwedi uma kwenzeka ukulahleka noma ukwebiwa, futhi i-Google ibingeke ibe ngaphansi. Ungaba yisisulu sokuhlaselwa ku-inthanethi, futhi untshontshelwe igama-mfihlo lakho. Noma ngenxa yokuthi usunesikhathi eside ungayisebenzisi futhi ukhohlwe nephasiwedi yakho. Ukusebenzisa inketho ye ukuvuselelwa kwephasiwedi, ungafaka iphasiwedi entsha, kodwa okokuqala kufanele uqinisekise i-Google ukuthi ungumuntu ongumnikazi waleyo akhawunti.
Nini Sakha i-akhawunti ye-Gmail, usicela uchungechunge lwemininingwane yomuntu siqu kanye neyokuxhumana engase ibe usizo uma ulahlekelwa iphasiwedi yakho. Vele usebenzise i-imeyili eyisipele, uvumelanise nefoni yethu, noma wengeze inombolo yakho yocingo futhi ungasebenzisa i-akhawunti yakho ye-Gmail futhi, kalula.
Ngemuva kwalokho Sihlukanisa izinyathelo okufanele uzilandele. Kodwa-ke, uma sikhuluma nge-akhawunti okungeyona eyomuntu siqu, okungukuthi, leyo edalelwe wena ngokusebenzisa a Empresa (isibonelo, umsebenzi noma isikole), lezi zinkomba zingase zingabi wusizo kuwe. Ngakho Sincoma ukuthi uhlole nomlawuli we-akhawunti yakho (umuntu onomthwalo wemfanelo odale i-akhawunti).
Ukhohliwe iphasiwedi yakho
Landela lezi zinyathelo ukuze ubuyisele i-akhawunti yakho ye-Google noma ye-Gmail:
I-Google izokubuza imibuzo embalwa ukuze uqinisekise ukuthi i-akhawunti eyakho. Zama ukubaphendula.
Uma unenkinga, zama ukulandela imiyalo yokutholwa kwe-akhawunti. Ungeqi noma yimiphi imibuzo bese uzama ukuphendula ngokwethembeka.
Sebenzisa ikhompuyutha, ithebhulethi noma i-smartphone ovamise ukungena ngayo ngemvume.
ESebenzisa isiphequluli sakho esijwayelekile bese uqala isikhathi lapho ojwayele ukwenza khona, ngokwesibonelo, ekhaya.
Imibuzo yezokuphepha oyibeka ngaleso sikhathi kufanele ibhalwe ngokufana ncamashi. Uma uyibeka ngosonhlamvukazi noma ngezinombolo, isibonelo.
Shintsha iphasiwedi yakho uma ucelwa. Khetha ephephile futhi ongakaze uyisebenzise ngaphambilini kule akhawunti.
Ungayakha kanjani iphasiwedi eqinile ye-Gmail?
Uma ungakwazi ukufinyelela i-akhawunti yakho ye-Gmail ngenxa yephasiwedi engalungile, ungacela entsha. Ukuze uvikeleke, i-Gmail ayisoze yakuthumela iphasiwedi yakho yamanje ukuze uyikhumbule. Ngakho-ke kufanele uqinisekise ubuwena bese ufaka iphasiwedi entsha ongayisebenzisa kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke.
Lapho udala iphasiwedi entsha, Sincoma ukuthi ulandele amathiphu ukuze uphephe. Kungaba kuhle uma ungakha ukulandelana okungasho lutho kwezinhlamvu okungaba lula kuwe ukuzikhumbula. Nazo-ke:
Le phasiwedi iyazwela futhi kunosonhlamvukazi okuthile kuyanconywa. Yize izinhlamvu ezigxilile zingavunyelwe.
Amagama-mfihlo kumele aqukathe izinombolo. Amagama ayimfihlo ezinhlamvu kuphela awanconywa ngoba kulula ukuwathola. Noma ukuthi izinombolo zilandelana, kodwa zihlanganiswe nezinhlamvu.
Kufanele iqukathe ezinye izimpawu ezisekelwe ku-ASCII (@, $, %, njll.)
Asikukhuthazi ukuthi ubhale amagama asetshenziswa njalo, izinhlamvu noma izinombolo.
Ngale ndlela uzoba nephasiwedi enzima kakhulu kubaduni noma abahlaseli ukuthi baqhekeze.
Sincoma ukuthi uyigcine endaweni ephephile noma usebenzise isiphathi sephasiwedi. Eqinisweni i-Google Chrome Ineyakhelwe ngaphakathi.
Ukhohlwe ikheli lakho le-imeyili
Emuva osukwini owenza ngalo i-akhawunti ye-Gmail ukuze ukwazi ukusebenzisa idivayisi ye-Android, nethebhulethi noma i-smartphone, futhi uyisebenzisele lokho kuphela. Manje, ifoni yakho yonakele futhi uma uthenga entsha awukhumbuli ikheli lakho le-imeyili. Akukho okwenzekayo, sinesixazululo:
Uzodinga inombolo yefoni yokutakula noma ikheli le-imeyili le-akhawunti oyixhume ngaleso sikhathi (enye i-akhawunti onayo, i-akhawunti yomlingani wakho, enye yezingane zakho, abazali bakho...).
Igama eligcwele olifakile ku-akhawunti. Ngokuvamile, ngokuvamile igama lakho nesibongo sakho.
Ukusuka lapha landela i- imiyalelo yokuqinisekisa ubuwena, futhi izokukhombisa a uhlu lwamagama abasebenzisi afana ne-akhawunti yakho.
Othile usebenzisa i-akhawunti yakho
Uma ubona umsebenzi ku-akhawunti yakho ye-Google, i-Gmail, noma eminye imikhiqizo ye-Google ongayazi, omunye umuntu kungenzeka uyayisebenzisa ngaphandle kwemvume yakho. Uma ucabanga ukuthi i-akhawunti yakho ye-Google noma ye-Gmail intshontshiwe, landela lezi zinyathelo ukuze ubone umsebenzi osolisayo, buyisela i-akhawunti yakho, futhi uyivikele:
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Google. Uma ungakwazi ukungena ngemvume, landela izinyathelo ezingenhla ukuze ubuyisele i-akhawunti yakho.
Buyekeza umsebenzi futhi uvikele i-akhawunti yakho ye-Google entshontshiwe. Buyekeza umsebenzi we-akhawunti yakho nokuthi yimaphi amadivayisi i-akhawunti yakho esetshenziswe kuwo.
Sebenzisa izinyathelo zokuphepha ezengeziwe. Ungakwazi ukwenza kusebenze ukuqinisekiswa okuzinyathelo ezimbili, uxhumane nebhange lakho noma iziphathimandla zendawo, ususe isofthiwe eyingozi etholwa i-antivirus yakho, ufake isiphequluli esivikeleke kakhulu, ufake isandiso Sesaziso Sokuvikela Iphasiwedi, uvikele izinhlelo zakho zokusebenza namadivayisi ngephasiwedi ukuze kungabikho muntu okwazi ukufinyelela. kubo.
Awukwazi ukungena ngemvume ngesinye isizathu
Uma ungakwazi ukungena ngezizathu ezingezona lezi ezingenhla, ungakhathazeki. I-Google ikunikeza ezinye izinketho ukuze ngikusize.
Buyisa i-akhawunti ye-Google esusiwe
Kungenzeka ukuthi ususe i-akhawunti ye-Gmail endala, futhi manje usuyayidinga. Uma kunento eyodwa enhle nge-Google, ukuthi usengakwazi ukuyithola futhi. Nokho, uma wayisusa kudala, kukhona ithuba lokuthi idatha equkethwe ngeke iphinde itholwe. Uma ukwazi ukuyithola, uzokwazi ukungena ngemvume ku-Gmail, i-Google Play nezinye izinsiza ze-Google njengokujwayelekile.
Ungakhohlwa ukuthi uma usuyitholile faka iphasiwedi eqinile.
Angikwazi ukubuyisela iphasiwedi yami ye-Gmail
Uma ngemva kwemizamo embalwa, awukwazi ukubuyisela iphasiwedi yakho ye-Gmail, futhi ngayo i-akhawunti yakho, siyaxolisa. Kungenzeka ngenxa yezizathu ezimbalwa, esinye sazo kungenzeka ukuthi akukwazanga ukuqinisekisa ukuthi i-akhawunti eshiwo ingeyakho. Ngakho njengoba isisho sihamba "clean slate". Sikumema ukuthi wenze eyodwa i-akhawunti entsha, kodwa kulokhu qiniseka ukuthi iphasiwedi yakho ivikelekile, futhi ngesikhathi esifanayo ukuthi ungayikhumbula kalula.
Ngethemba ukuthi lolu lwazi lube usizo kuwe, futhi ungakwazi ukubuyisela iphasiwedi yakho ye-Gmail.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Aplicaciones » Ungalithola kanjani kabusha iphasiwedi ye-Gmail